Dhangeessuu Otoolaa Raawwachuu
Dhangeessuu otoolaa raawwachuuf, Ufmaa shallagni dandeessifamuu qaba. Meeshaalee - Qabiyyeewwan Maadhee - Ufmaa shallaggii filadhu(mallattoo filannoo cina ajajichaatti yeroo Ufmaa shallaguun dandeessifame argita).
Dhangeessuu otoolaatiin, fakkeenyaaf, ida'ama gatii avereejii ida'ama hundaa caalu shooluu dandeessa. Yoo ida'amni jijjiirame, dhangeessuun osoo haalata biroo harkaan raawwatin haalaan jijjiirama.
Maadheelee kan haalata otoolaa irratti raawwachuu barbaaddu filadhu.
Haala(lleen) gara sanduuqa qaaqaa galchi. Qaaqni bal'inaan LibreOffice Help keessatti ibsama, akkasumas fakkeenyi armaan gaditti kennameera.
Fakkeenya Dhangeessuu Otoolaa: Gatii Jiddugalee Gubbaatti/Jalatti Ida'ammii Shooluu
Ejjatoo1: Gatiiwwan Lakkoofsaa Uumi
Gatiiwwan muraasa gabatee kee keessatti xiyyeeffannaa murtaa'e kennuu barbaadda. Fakkeenyaaf, gabatee g urgurammeewwan keessatti, gatiiwwan avereejii olii hunda magariisaan akkasumas gatiiwwan avereejii gadii diimaan agarsiisuu dandeessa. Kun dhangeessuu otoolaatiin ni dandeessa.
Man'eelee tokkoo isaanii keessatti foormulaa =RAND() galchitii, lakkoofsa hin murtoofne 0 fi 1 jidduu argatta. Yoo intiijerii jidduu 0 fi 50 barbaadde, foormulaa =INT(RAND()*50) galchi.
Tarree lakkoofsa hin murtoofnee uumuuf foormulaa garagalchi. Xiyyoo jala mirgaa maadhee filatamee cuqaasiitii gara mirgaatti hanga haammangaan maadhee barbaadame filatamuutti harkisi.
Haala walfakkaatuun akka olitti ibsametti, tarreewwan lakkoofsota hin mutoofnee uumuuf xiyyoo maadhee mirgaa gad harkisi.
Ejjatoo 2: Haalota Man'ee Ibsi
Maadhee duwwaa keessa cuqaasiitii ajaja Maadheelee Dhangeessi baafata haallee keessaa filadhu.
Haalata lammaffaa qindeessuuf, ammas man'ee duwwaa keessa cuqaasiitii akka armaan gadiitti ibsameen itti fufi. Man'eef haalluu duubee addaa kenniitii maqaa(fakkeenya kanaaf, "Jala") ramadi.
Ejjatoo: Jiddugalee Shallagi
Fakkeenya murtaawaa keenya keessatti, avereejii gatiiwwan hin murtoofnee shallagaa jirra. Bu'aan maadhee keessaa kaawwama:
Qaree man'ee duwwaa keessa, fakkeenyaaf, J14, kaa'iitii Saagi - Dalagaa filadhu.
Masakaa Dalagaa Tole dhaan cufi.
Ejjatoo: Haalota Man'ee Fayyadami
Amma dhangeessuu otoolaa wardiitti raawwachuu dandeessa:
Maadheelee hunda lakkoofsota hin murtoofne qaban filadhu.
Haala akka armaan gadiitti qindeessi:Yoo gatiin man'ee J14 gadi ta'e, haalata man'ee "Jala" dhaan dhangeessi, akkasumas yoo gatiin man'ee irra guddaa ykn walqixa J14 ta'e, haalata man'ee "Gubbaa" tiin dhangeessi.
Ejjatoo: Haalota Man'ee Garagalchi
Dhangeessuu otoolaa gara maadheelee birootti booda raawwachuu:
Maadheelee dhangeessuu otoolaa fudhatanii turan keessaa tokko cuqaasi.
Maadhee gara gabatee muraatti garagalchi.
Maadheelee dhangeessuu walfakkaatu kana fudhachuuf ta'an filadhu.
Title is: Dhangeessuu Otoolaa Raawwachuu